သင်၏ LG G2 ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဥရောပ firmware သို့မွမ်းမံရန်။ | Androidsis
ဒီနေ့ငါတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြချင်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LG G2 ကို update လုပ်ပါ, သာနိုင်ငံတကာမော်ဒယ် D802မှာ LG ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဥရောပ firmware အော်ပရေတာကအခမဲ့။ အထူးသဖြင့် Firmware ဟာ D80220H ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ Root နှင့်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုထိန်းသိမ်းသည်နှင့်ဒုတိယသော Root ရော Recovery နှစ်ခုလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ OTA မှတစ်ဆင့်ဗားရှင်းအသစ်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအနေဖြင့်ထားရှိခြင်း Android 5.0 မူလ LG Lollipop တစ်လသို့မဟုတ်သုံးခုအတွင်းချထားသည်တခါ။
ငါဒီမှာရှင်းပြဖို့သွားမယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုတစ် ဦး ဖြစ်ကတည်းကအားလုံးအရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် Open Europe version D80220H မှမူလ KDZ, များအတွက် ZIP format နဲ့အသွင်ပြောင်း ပြုပြင်ထားသော Recovery မှလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် TWRP Recovery 2.8.1.1 မှ Rom Optimus RS 1.4 မှအောင်မြင်စွာထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။
ဒီလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာမဆက်ခင်သင်သိသင့်သည် ဤသည် LG G2 မော်ဒယ် D802 များအတွက်သာတရားဝင်သည် နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်အဖြစ်လူသိများ။ အလှည့်မှာတော့ငါကပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့ရှင်းပြပါ တစ် ဦး Rom စတော့အိတ်ကနေစတင်ရန်လိုအပ်သော AOSP ROM မှမဟုတ် Stock Stock ROM မှတိုက်ရိုက်လုပ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
1 ဤ ROM ကိုမဖွင့်မီလိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
3 LG Open Europe D80220H မူရင်း firmware တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
ဤ ROM ကိုမဖွင့်မီလိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
LG G2 မော်ဒယ် D802 သာလျှင်သီးသန့်ဖြစ်သည်။
Terminal အမြစ်တွယ်ပြီးပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုပိုင်ဆိုင်သည်.
EFS ဖိုင်တွဲ backup နှင့် nandroid Backup.
USB debugging လုပ်နိုင်ပါတယ် setting ထဲကနေ။
အပလီကေးရှင်းများနှင့်အချက်အလက်များ၏အရန်ကူးခြင်း LG G2 ၏အတွင်းမှတ်ဉာဏ် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်စဉ်တွင်အရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ZIP ဖိုင်နှစ်ခုရှိသည်၊ တစ်ခုအတွက် စက်ရုံမှလုံးဝဖယ်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်, ဆိုလိုတာက LG ကနေ Recovery (သို့) Recovery Stock ကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်
လိုချင်သူအပေါင်းတို့အဘို့တစ်စက္ကန့် ZIP ဒီနောက်ဆုံးပေါ်ဥရောပ firmware ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ, အော်ပရေတာ - အခမဲ့ပေမယ့်က cကျွန်ုပ်တို့၏ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှင့် ROOT ခွင့်ပြုချက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်း. ဘယ်ဒီမှာကျနော်တို့ကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ်.
ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသော ZIP ကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သာလျှင်လိုအပ်လိမ့်မည် ၎င်းကို LG G2 ၏ internal memory ထဲသို့ကူးယူပါ ဒီကိုလိုက်နာရန် Recovery mode မှာ update နှင့် reboot လုပ်ဖို့ D80220H firmware တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တောက်ပသောခြေလှမ်းများ:
LG Open Europe D80220H မူရင်း firmware တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
ပြုပြင်ထားသော Recovery မှကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါမည်။
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ အားလုံးကိုသုတ်ပြီးရွေးပါ LG G2 သို့မဟုတ် Internal SDcard ၏ internal memory မှအပကျန်.
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ Install ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူးယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားပါ Open D80220H firmware ZIP ကိုဖွင့်ပါ.
ကျနော်တို့တောင်းဆိုထားသော option ကို execute ဖို့ဘားရွှေ့ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ကိုစောင့်ဆိုင်းပြီးသည်းခံလျက်စောင့်နေကြ၏
နောက်ဆုံးတွင်ထို option ကိုရွေးပါ ယခု Systen ကို Reboot လုပ်ပါ နှင့်ငါတို့ပြန်လည်စတင်သည်အထိစောင့်ပါ LG G2 အမျိုးအစား D802 အသစ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် firmware Open Europe D80220H ကိုပြသခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » သင်၏ LG G2 ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဥရောပ firmware D80220H သို့မွမ်းမံရန်
ဟီဆန်ဇီကို၊ ကျွန်တော်ဒီ post ဟာဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကတော့ "Bq Aquaris E6 မှာပြုပြင်ထားသော Recovery and Root ကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ" ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကကျွန်မအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မှာပါ၊
d 805 အတွက်ဤရွေးချယ်မှုမရှိပါ။ Lollipop အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်မလား ငါ g2 ကိုပဲလှည့်ပြီးနောက်တစ်ခုကပြန်လည်နာလန်ထူလာစေမယ့်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ခြင်းကိုကြောက်တယ်။ ငါဘယ်လိုလုံခြုံစွာလုပ်နိုင်မှာလဲ။ ငါ roms တွေထည့်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါက root ပဲ။ ငါဘာလိုသေးလဲ။
«အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Rom Stock မှစတင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုရှင်းပြသည်။ this ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟဲလိုဖရန်စစ်၊ ရှင်းပြပါရစေ၊ ဒီ rom ကိုခဏလောက် download လုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ် pc ထဲမှာသိမ်းထားပါ၊ အမှုမှာ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ် twrp update နှင့် claudyg3 rom မှလာသည်၊ လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်က၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပါက၊ ဤဆောင်းပါး၌သင်စိတ်ကြိုက် rom ရှိပါကထည့်သွင်းခြင်းမပြုရန်သင်ဘာပြောသနည်း၊ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ပြီးယခုတွင်ကျွန်ုပ်တွင် megabrick ရှိနေသည်ကိုမမှတ်မိပါ။ : - \_ t
ဆဲလ်ကလှည့်သည် LG logo ကိုထည့်ပြီးပြန်လာပြီးပြန်လည်စတင်သည်။ ထပ်တူထပ်မျှထပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမရှိ၊ သိုလှောင်ထားသည့်ပစ္စည်းလည်းမရှိ၊ dowloader mode တွင်ထားရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မထည့်ပါ။ အမှားအယွင်းတချို့ပြီးရင်မျက်နှာပြင်ကအနက်ရောင်လင်းသွားတယ်။ အနက်ရောင်ငါအကူအညီလိုတယ်ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး !!
Javier ငါဆဲဆဲပဲ၊ မင်းရဲ့ပြproblemနာကိုမင်းရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်
ခွင့်ပြုပါ။ ဒီဥရောပ rom ကို 4g နဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ငါအားဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီ၊ အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမယ့်မိုဘိုင်းက lg လိုဂိုမှာပဲရှိနေတယ်။ ငါစိတ်ဝင်စားလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါစိတ် ၀ င်စားလို့ပါ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ရမ်ကိုဆောင်တတ်၏ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နှင့်စောင့်ဆိုင်း
lolek krochasnikov ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ အားလုံးဝမ်းကျပါပါစေ။ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ sw ၏မည်သည့် version သည်အသစ်ဖြစ်သနည်း။ d80220h သို့မဟုတ် lg g0 ၏ d80220b သည်၎င်းသည်ပြီးဆုံးသွားပြီးကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုယူပြီး h ကိုထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဘာအသစ်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်၊ ငါပြန်သွားရရင်သင့်အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
lolek krochasnikov အားပြန်ပြောပါ
အက္ခရာစဉ်စဉ်ကအဖြေပေးသည်။ H သည်ခထက်ပိုသည်။
Papuh Walls ဖြင့်သင်၏ဖုန်းနောက်ခံသို့အရောင်များပိုပေးပါ
Cicret လက်ကောက်၊ အနာဂတ်ရဲ့လက်ကောက်သို့မဟုတ်အခြား Android တုတု?